15% Ampiasao ny media sosialy hitadiavana orinasa eo an-toerana | Martech Zone
Alatsinainy Aprily 29, 2013 Alatsinainy Aprily 29, 2013 Douglas Karr
Fantatrao ve fa ny 15 isan-jaton'ny mpanjifa mampiasa tranokala tambajotra sosialy hitadiavana orinasa eo an-toerana? Orinasa betsaka loatra no tsy mahazo ny fotoana hahafahany mampivelatra ny vondrom-piarahamonin'izy ireo manokana ao anaty media sosialy, manampy amin'ny fampitomboana ny fahefany sy ny fahafantarana azy ao anatin'ny tambajotran'ireo olona liana indrindra amin'ny vokatra sy serivisin'izy ireo. Na ireo izay mahatsapa ny fahafaha-manao aza dia mbola sahirana amin'ny fanatanterahana izany.
Efa niadian-kevitra izahay Fitaovana automatique marketing any Balihoo eo an-toerana tao amin'ny bilaogy teo aloha. Navoakan'izy ireo vao haingana ity infographic ity miaraka amin'i zava-misy eo amin'ny media sosialy ny orinasa rehetra dia tokony ho mailo.
Tags: Balihooautomatisation marketing eo an-toeranafikarohana eo an-toeranaAutomation marketing any an-toeranazava-misy eo amin'ny media sosialy
Responsys mandefa ny safidin'ny fifandraisana
Apr 30, 2013 amin'ny 10: 30 AM
Ity lohateny infografika ity dia tsy ampy ny teny hoe "Ihany". Raha ny marina, raha ampitahaina ny 11% amin'ny mpanjifa dia mbola mampiasa ny pejy mavo vita pirinty. Ny media sosialy dia tsy toeram-pikarohana eo an-toerana (farafaharatsiny, tsy mbola).